Modal tento kungenzeka, ungase generically ukuchaza theory Amathuba umcimbi ngaphansi kwezimo ezithile. Lezi zimo kungaba isifiso noma ukwenqena elilodwa abahlanganyeli izenzakalo, ikhono bophezela ngokuya nemithetho, imithethonqubo, imithetho, ukuhlonipha kanye nezinye izimo. Njengomthetho, isitatimende uthatha uhlobo ezicatshangwayo noma ezizathwini. Zombili lezi zenzo kungaba ukuveza amathuba kanye isixazululo. Ngaphezu kwalokho, abakwazi siyabuthola yini ubufakazi bokuthi isenzo esithile njengoba esivikelekile kakhulu kulezi zimo. Kukhona nensimu emila kwamukelekile ukubeka esenzweni esithile. Ngakho, isenzo eyisibonelo ingaveza imvume. Ngaphansi imvume ke kuchazwa lapha njengoba permissibility futhi ongagunyaziwe noma ucele ukugunyazwa. Isenzo engase isize ukuphakamisa, isibonelo, njengoba ukusola noma isimo sabo sengqondo ekuqaliseni ukusebenzisa imiqondo lokhu noma lokhuya.
Kulokhu, kungase namandla abakwazi kuphela ubheke isimo yezinto esikhathini esizayo, kodwa futhi ingasetshenziswa nganoma isiphi isikhathi (Nokho nje isenzo eyisibonelo ayinazo inkomba sikhathi).
May, amandla vs. can, ayengakwenza
Tento ngolimi lwesiNgisi, kokubili ungakwazi futhi Ayikwazanga, kunencazelo efanayo, kodwa ezimweni eziningi ikhono lokubonisa uhlamvu ngabanye ukuba izenzo ezithile. Ngokuvamile emshweni lofanako kungenziwa enikeziwe njengoba may, namandla, can, kungenzeka. Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa kungase, angase Ngenxa isidingo ithoni ngonanzelelo. Lezi zenzo ngolimi lwesiNgisi kukhona kunjengokungathi izinkomba Okusemthethweni. Lena ezifanele, isibonelo, ingxoxo kanye nabo ebhizinisini kanye nozakwabo, uma uxhumana nabantu ezingabazi noma ezimweni olubucayi. Enkulumweni eyayivame kaningi ngangokunokwenzeka ukuhlangana zonke ikani efanayo futhi ayengakwenza.
Tento kungenzeka, kungenzeka sithi ungaqiniseki ukuthi kungenzeka ngesikhathi kubulawa okuthile, kodwa namanje bavame ukuba bakholelwe ukuthi Esimeni esinjalo kungenzeka ngempela, esekelwe izisusa zethu siqu izimo yangaphandle, izimiso nemithetho jikelele noma imikhuba. Kungaphawulwa ukuthi ngokuvamile musa zinkulu ukungabaza futhi ingxenye wokuqagela. Isenzo ezingase zisetshenziswe efanayo, kodwa ezisetshenziselwa zokuxhumana engahleliwe.
- Angase eze / Angasebenza beze.
- Zingase ukusisiza / Angasisiza.
- Ukuthi kungaba isizathu esisodwa / Lokho kungase kube esinye isizathu.
Lapho ulungiselela kuphikisa kuyizinhlayiyana hhayi ngomqondo kunalokho ibhekisela ingxenye okwalandela kunokuba angabuza noma namandla.
- Angase angabi khona England ngesikhathi zonke / Kungenzeka zonke eNgilandi.
- Bangase uthole indlu nge zokufudumeza / Abakwazi ukuthola indlu nge zokufudumeza.
Uma ufuna ukuveza ukuthi esikhathini esidlule, cishe kwenzeka isenzakalo, kodwa ungaqiniseki, ungasebenzisa kungase kudingeke, bangase babe, ekubalandeleni sento efakwa ngesimo esithi esidlule.
- Kungenzeka ukuthi wakuphawula lokhu isikhangiso / Kungenzeka ukuthi wakuphawula lokhu ngcono.
- Angase hhayi Ningibonile / Wayengeke angibone.
- Zingase Bekungamele ukwenze loko / Abakwazanga ukukwenza.
Futhi bangase baye balandela esithi esidlule ingase iveze ukuthi uma umcimbi othile ziyokwenzeka, ke kwakuyoba nokwenzeka kwezinye esenzakalweni esithile sokushisekela.
- Uthe ibingaba zonke kwesokudla, uma isimo sezulu uye waba muhle. (Kodwa isimo sezulu akukuhle, ngakho-ke kwakungeyona kulungile.) / Uthe konke kungaba kulungile, uma isimo sezulu esihle. (Kodwa isimo sezulu akukuhle, ngakho-ke kwakungeyona ukuze).
Kwangathi / kungenzeka ingasetshenziswa uma sithi othile uvunyelwe / Awuvumelekile ukwenza izenzo ezithile.
- Zingase senze njengoba bathanda / Bangenza abakuthandayo ngokufana ncamashí befisa.
- I umthengisi abanakuthengisa ukuthi incwadi ngezansi intengo / umshicileli sika umdayisi awukwazi ukuthengisa le ncwadi ngentengo ukushicilela aphansi.
Ngaphezu kwalokho, le tento kungavunyelwa ukwenza okuthile.
- Ungase ukhulume / Can ukhuluma.
- Ungashiya ngokushesha ngangokunokwenzeka usuqedile / Ungakwazi ushiye ngokushesha kwenziwe.
Noma buza livu (nakuba ngolimi lanamuhla ingase ngempela ezingavamile).
- Ngicela ungiphe usikilidi? / Ngingaba nayo usikilidi?
- Kungenzeka ngibuza uma wena umnikazi? / Ngingakubuza - ungumnikazi?
Njengoba simokwenta kungenzeka, kungenzeka njalo eze kuqala isilandiso zidinga ngemuva kwesenzo base ifomu, babe -S, amafomu -ed futhi -ing zibonisa hhayi ngesikhathi umcimbi,
Njengoba omunye isilandiso akukwazi ezingaphezu kweyodwa eyisibonelo isenzo, yesibili isenzo eyisibonelo sithathelwe indawo umuzwa ofanayo, ngokuvamile "semimodalny" Isenzo. Okungenzeka indawo kungaba, isibonelo, kungenzeka.
- umyeni wakho kungenzeka kudingeke uwuyeke umsebenzi / umyeni wakho kungase kudingeke kudingeka bawushiye phansi umsebenzi.
- Iyoba kwenzeka / kungenzeka afika.
Uma ufuna ukuthatha isenzo okwalandela alikho ifomu base ifomu -ing we esithi esidlule, noma ukuba-kwekusebentisa, tento kungenzeka, awukwazi ukusebenzisa amandla. Ungabeka njengomsebenzisi esikhundleni, isibonelo, bavunyelwe.
- I am kakhulu avuna abantu bavunyelwa ukuba agqoke kudlala.
- Baye uya bavunyelwe ukuhamba izitimela.
Ukuze wenze nokucabanga esinenhlonipho kakhulu, obucayi noma zinsizwa, lamandla isenzo ngolimi lwesiNgisi ingasetshenziswa ngokuhlanganyela efana noma ufuna.
- Ngacabanga mhlawumbe ukuthi ungathanda eze kanye nami / Ngicabange ukuthi ungaba yini ukuya nami?
- Ungase uthande ukuzama ezinye esitolo / Ungafuna ukuzama ezinye esitolo.
Noma by Kungenzeka iqembu kanye ibizo, i isiphawulo noma kuya-kwekusebentisa.
- Ngicabanga ukuthi kungase kube kuhle umqondo ukumisa ukurekhoda manje / ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuwumqondo omuhle - ukumisa ukurekhoda njengamanje.
- Kungase kube ukuhlakanipha ukuthola imoto entsha / Ungafuna ukuthatha imoto entsha.
umfutho esinganqunywa kanye, futhi kungenzeka kanye, ngokusiza ukuveza kucatshangwa ukuthi isenzo ngesisekelo ezinengqondo futhi kuyafaneleka, kungaba yisizathu esivame "kunganjani." Kujwayele has a uhlamvu okunengqondo, kodwa futhi, kuye ngokuthi isimo, kaningi kuba obusolisayo noma bhinqa uhlamvu oluncane. Vala ukubaluleka kwenkulumo ethi, - "ukuze bakwazi, njengoba nakuyicabanga, ...", "ukuze ukwazi ukuphumelela efanayo."
- Ungase ukuvula kanye nabo bonke / Ungase ube kanye ngiwavule wonke.
- Angase athathe kanye imoto / Wayekwazi, kungenjalo, ukuthatha imoto.
Njengoba kwaba njalo endabeni ka amazwi ambalwa inkonzo, ukuba ugcine isikhathi iphepha ekulungiseleleni kuyizinhlayiyana ezingezinhle ungasebenzisi aphostrofi kungancipha hhayi bese yengezwa sento. Nokho kungehlisa futhi ngeke kwenzeke njengoba othandwayo, isibonelo, sento umsipha-khona. Mhlawumbe kwenzeka ngenxa ngokucacile of semantic ukulayisha kuyizinhlayiyana ezimbi e ngesivinini ezivamile. Uma lokho okushiwo yinkulumo isiphakamiso is a engenakwenzeka ezincwadini umcimbi, hhayi uwela ngokuzenzakalela ucindezelekile, nezinhlayiyana olunophawana zivamise ayisetshenziswa ifomu encishisiwe. Ngezinye izikhathi kungenzeka sehliselwe ngeke kwenzeke. Modal isenzo angeke sehliselwe mayn't kakhulu ezingavamile yolimi lwanamuhla
Kuyini ukuhlaziywa morphological? Isikimu kanye nokuhlaziywa uhlelo
Ifomu kokuqala zebizo: izibonelo
Njengoba nesilulumagama selulwimi Russian: amathiphu
Umholi womshado - Maxim Danilov
Ground-emoyeni ophansi: izici of imvelo kanye nezici zayo
Electric ensimini imigqa. isingeniso
Ekilasini Ukusingathwa B: isitoreji kanye nokulahlwa
La maqhinga engcono ezivela emhlabeni wonke